नयाँ युवतीसंग देखिएपछि पत्रकारहरुले सलमानलाइ प्रश्नै प्रश्न गरेपछि दिए मुखभरिको जवाफ ! आखिर को हुन् यी युवती ? (भिडियो) – Khabar Silo
एजेन्सी– बलिउड अभिनेत्री करिना कपुरले मेलबर्नको क्रिकेट मैदानमा आइसिसी टी २० वल्र्डकपको ट्रफी अनावरण गरेकी छिन् । महिला तथा पुरुष दुवै वल्र्डकप ट्रफीको अनावरण गरेकी हुन् । अब उनको यो भिडियो र फोटो विश्वमा छाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलले महिला तथा पुरुष टी २० क्रिकेटको प्रतियोगिता अर्को वर्ष अष्ट्रेलियामा गर्दै छ । सन् २०२० […]
बलिउडसँगै हलिउडमा पनि ख्याति कमाउन सफल भएकी प्रियंका चोपडाले आफ्नो नयाँ पुस्तकमा जीवनका रोचक प्रसंगहरु खुलाएकी छिन्। पुस्तक ‘अनफिनिस्ड’ मा प्रियंकाले विद्यालय जीवनमा आफ्नो प्रेमीलाई घरमा बोलाएको र आफ्नी आन्टी एक्कासी घर आएपछि आफूले प्रेमीलाई दराजमै लुकाउने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेकी छिन्। पुस्तकका अनुसार प्रियंकाको उक्त प्रेमीको नाम बब थियो। आफूले बबलाई असाध्यै माया […]